Anarana Sultan Rahi
Maty 9 janoary, 1996
Taona niasana 1956-1996(ankehitriny)
Seha-pitiavana Shaheen (Fisaraham-panambadiana)
Sultan Rahi (1938 - 1996) dia tena malaza mpilalao sarimihetsika Indiana. Izy ankamaroany niasa toy ny manao zavatra ky.anhun maherin'ny 700 Punjabi sy Urdu sarimihetsika ao Punjabi sarimihetsika ary ny anarany atao Guinness World Records Bokin'i Teraka ao Uttar Pradesh, ny Britanika Raj. Indrindra Punjab, Pakistan sy India teo amin'ny Sikhs.
1 Voalohandohan'ny fiainana
2 Start ny Career
Voalohandohan'ny fiainana[hanova | hanova ny fango]
Tamin'ny 1938, ny Subedar Major Abdul Majeed ny tafika dia fitahiana amin'ny lahy, rehefa avy nijery ny tavany zanany dia visualized fa indray andro any dia mety hitondra ny olona ho mpanjaka izy, ka dia anarana hoe toy ny Sultan Khan Muhammad. Taty aoriana, dia hita fa tsy izy ihany no nitondra sarimihetsika orinasa ao Pakistan ho satro-boninahitra Mpanjaka fa nitondra ny fon'ny olona an-tapitrisany izay mahatakatra Urdu sy Punjabi fiteny. Ny hoe ao amin'ny Tafika dia navoaka avy amin'ny tanàna ho any an-tanàna, fa indrindra dia nitoetra tao Rawalpindi. Kilonga fianarana ny Sultan Khan no fandaharana tao Rawalpindi, satria ara-pivavahana ny fianakaviana ny rivotra iainana ao an-tokantrano fotsiny ny Silamo dia toy izany lafiny io dia manana anjara asa lehibe ao amin'ny fototra fisehoana ankapobe izay mazava tsara ny hita sy mbola velona eo amin'ny fiainana mandra-pahafatiny. Tamin'ny taona fito, Sultan nianatra tsianjery telo-polo Siparas (Parts) ny Quran amin'ny trano fivavahana ny Gawalmandi Rawalpindi faritra eo ambany fanaraha-mason'ny Qari Abdul Sattar.
Koa, Sultan taloha hoe in-dimy Azaan ao amin 'ny trano fivavahana. Sultan Khan nanana rahalahy roa sy ny anabavy iray, anti-panahy ny rahalahy maty teo anoloan'ny talohan'ny nahaterahan'i Sultan sy ny rahalahy faharoa maty indray mandeha monja izy efa-taona kosa ny anabaviny maty, rehefa maty ny rahalahiny faharoa. Resultantly izy manga maso ny ray aman-dreny, indrindra ny rainy, izay naniry fa tsy maintsy niara Sultan Air Force. Ankoatra ny maha-tena ara-pivavahana sy ny zanak'i miaramila manokana dia nirehitra ny tia fanatanjahan-tena no tena mavitrika dia nandray anjara tamin'ny lalao fanatanjahan-tena toy ny Sekoly tsy tapaka matoanteny mpikambana ao amin'ny ekipa sy amin'ny fifandraisana izany dia nitsidika Lahore sy ny reniny. Ray ny Sultan Khan tena hentitra momba ny fianarana sy ny fanabeazana ny zanany, dia tsy leferina fa ny zanany mbola hita akory ny sekoly kilasy. Fa Sultan Tsy izay liana amin'ny ny fianarana, fa dia tena mirona mankany amin'ny hetsika ara-batana toy ny fanatanjahan-tena, sy ny baolina kitra matoanteny. Nandritra ny fahazazany Sultan tsy nanana traikefa mba hijery sarimihetsika amin'ny sinema, fa araka ny voalaza imbetsaka ao ny fanadihadiana fa hatramin'ny fahazazana ny dia miafina mpilalao ao aminy dia tsara avy tamin'ny sekoly andro, dia nampiasa ny asa ao anatin'ny ara-dalàna ny fiainana, raharaha sy ny fanampiny curicular asa.
Start ny Career[hanova | hanova ny fango]
Farany Sultan Khan nanodidina manohitra ny faniriana miafina, ary nifindra tany Lahore noho ny fitiavany sy izay manao. Ary tonga tany Lahore tamin'ny mpivady iray ny lamba sy ny tafika lehibe baotin'i amin'ny be ny fanirian-daza sy ny nofy. Rehefa avy rehefa nitody tany gara Lahore dia nanakarama ny efitrano ao Kachi Abadi ambadiky ny Malika Studios (tatỳ aoriana Javedaan anarana Studios) akaikin'i Lahore Jimkhana. Nampiasa ho tonga any Al-Hamra Art Theater noho ny manao zavatra ao amin'ny dingana tsehatra, tamin'izany andro izany dia kely efitrano tamin'ny 125 seza fahaiza fa tsy afaka mamorona sehatra ho an'ny tenany ka nanomboka nitsidika Mpanjaka Circle Hotel akaikin'i Lakshmi Chowk misy ny ankamaroany mpilalao Fanaonay ny nipetraka manodidina nandritra ny fotoana fialam-boly. Near Lakshmi Chowk, ny foiben'ny ny horonan-tsary sy ny mpamokatra Distributor ny biraon'ny Royal Park no toerana hafa ny olona avy amin'ny filmdom dia mora. Fa na dia eo aza ny ezaka rehetra-avy Sultan Khan tsy afaka ny hahazo ny sain'ny rehetra mpamokatra sarimihetsika na mpanao sarimihetsika. Nandritra izany fotoana izany dia nihaona tamin'i Qavi sy mozika talen'ny Kamal Ahmed, izay ihany koa ny miady mafy mba haka toerana. Sultan Kamal Ahmed Khan sy lasa namany, ary miaraka nanomboka nitsidika mpamokatra horonantsary isan-karazany ho an'ny fahafahana ny hanao zavatra sasany. Tamin'ny ny fangatahan'ny Qavi, Sultan Khan dia afaka ny hahazo kely fidirana ao amin'ny sehatra tantara Shabnam Roti Hai, Riaz Bukhari, izay tonga avy tany Peshawar ny hanao zavatra ihany koa ny ampiasaina nitsidika Al-Hamra Theater, izy rehefa nahita ny fitiavana sy ny hanao zavatra ny Sultan Khan in dingana kilalao Shabnam Roti Hai, naminavina fa indray andro izy (Sultan Khan) ho lasa ny Top mpilalao ao Pakistan.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sultan_Rahi&oldid=798511"
Teraka tamin'ny taona 1939
Maty tamin'ny taona 1996
Voaova farany tamin'ny 16 Martsa 2017 amin'ny 16:48 ity pejy ity.